Blockchain News 9 Janoary 2018 - Blockchain News
Janoary 9, 2018 Admin
Cryptocurrency fitsipika nanolo-kevitra tao Vermont
A-panjakana mpanao lalàna tao Vermont dia nanolo-kevitra ny volavolan-dalàna mba hamoronana rafitra fitsipika vaovao ny fampiasana ny teknolojia blockchain.
Ankoatra ny didy mba maro sy ny tatitra momba cryptocurrencies blockchain, izany indrindra fa manoritra ny fomba mety manasokajy ny fanjakana toy ny orinasa sasany “Hafanàm-po an vola voafetra andraikitra orinasa,” indrindra fa ireo izay miasa ny tambajotra.
Ireo orinasa te, raha ny volavolan-dalàna no nankatoavina, tsy maintsy handoa “amin'ny endrika nomerika ny vola hetra ho raharaham-barotra mitovy amin'ny $ 0.01” isaky ny vondrona vaovao ny cryptocurrency noforonina, varotra na nafindra.
“Ny vola nomerika orinasa andraikitra voafetra dia afa-miala amin'ny hetra raha tsy izany dia azo ampiharina” mamaky ny volavolan-dalàna.
Ny volavolan-dalàna vaovao ihany koa ny miantso ny “Fintech Summit,” izay mety hitondra miaraka fanjakana sy ny orinasa mpandray anjara hiresaka momba ny fomba Vermont afaka hampiroborobo ny fampiasana teknolojia ny midadasika kokoa. Ny fanjakana dia manokana $25,000 mba hanampy bola ny hetsika, eo ambany fiahian'ny ny Masoivoho ny Varotra sy ny Community Development.
Chase JPMorgan Filoha Tale Jeneralin'ny Jamie Dimona manenina hoe Bitcoin dia hosoka
JPMorgan Chase Filohan'ny & Tale Jeneralin'ny Jamie Dimona hoy izy Talata lasa malahelo amin'ny fanehoan-kevitra izay niantso Bitcoin ny hosoka amin'ny banky Septambra fihaonambe.
Tamin'ny fotoana, Dimona nilaza fa afo JPMorgan mpivarotra raha natakalo tao amin'ny crypto-Sandam-bola.
"The andian-tsoratra rojo tena misy. Afaka manana crypto Yen sy ny dolara ary ny zavatra toy izany…"Dimona hoy ny tafa sy dinika manokana FOX Business.
Ny bitcoin ahy foana izay ny governemanta no mihevitra momba ny bitcoin iany araka ny mahazo tena lehibe, ary fotsiny aho manana hevitra hafa noho ny olon-kafa. Tsy liana aho fa ny be ao amin'ny foto-kevitra mihitsy.
US Federaly Reserve Bank Filoha: Bitcoin Tsy azo itokisana mpifaninana ho any amin'ny US dolara
Bitcoin nomerika sy ny vola dia tsy manan-danja maneho ny loza mitatao ho an'ny U.S. dolara, Minneapolis Fed hoy ny Filoha Neel Kashkari.
“Tsy mahita bitcoin ho toy ny azo itokisana mpifaninana ho an'ny dolara tany Etazonia Amerika, ary ny antony dia ny sakana amin'ny fidirana ho anao mamorona anao manokana vola sy ny ahy ny famoronana ny virtoaly vola … dia aotra,” hoy izy nandritra ny tarehin'ny tany Minnesota-bahoaka.
Kashkari niaiky fa cryptocurrencies bitcoin sy ny hafa dia mety handray anjara asa lehibe kokoa manerantany amin'ny ho avy, fa hoy izy: Amin'izany dia mijanona ho fanontaniana marika.
“Noho izany misy rehetra ireo vola madinika vaovao alt namoronana azy isan'andro, ary raha mba milaza fa maro be ihany ny BitCoins izay handeha ho vanja milevina, vokany raha resaka mifangaroharo amin'ny alt hafa rehetra izany vola madinika dia afaka manana ny vidim-piainana mbola, satria tsy fantatrao izay ireo mba hatoky,” hoy izy. “Mieritreritra izany fotsiny aho dia manana lavitra ny nialoha fantatsika ny fomba mampihorohoro izany avy.
Bitcoin hoavy tsenan'ny dia misokatra ho an'ny Thailand ny mpampiasa vola
Phillip Fiarovana Thailand no namela Thai mpampiasa vola mba haminavina amin'ny iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny bitcoin Dérivés varotra eran-service, Thailand ny tsena raha dalàna ao marimaritra iraisana fa ny hetsika dia ara-drariny.
Asa fanompoana toy izany dia manolotra bitcoin hoavy ara-barotra eo amin'ny Chicago Board Options Exchange (CBOE) ary ny varotra, Chicago Exchange (CME).
Tale Mpitantana Low Jereo ny Kiong Thai mpampiasa vola hoy ny sasany dia liana amin'ny bitcoin sy afaka hanaiky ny fampiasam-bola amin'ny hoavy loza raiki-tampisaka.
“Mampiasa bitcoin toy ny fototra pananana momba ny CBOE sy CME lehibe kokoa dia mitarika ho amin'ny fanekena ny bitcoin hoavy azo antoka izy ireo toy ny rafitra fandoavam-bola ary nifehy ny US Fiarovana sy Exchange Commission,” Mr Low Hoy ny gazety.
“Koa satria izany [fampiasam-bola] vokatra dia eo ambany fanaraha-mason'ny ny modely vatana fitsipika, teboka iray ny olana amin'ity raharaha ity dia tsy mikasika ny hosoka na famotsiam-bola, fa ny fomba vokatra io dia manana loza avo,” hoy ny fanambarana.
Praiminisitra Prayut Chan-o-Cha vao haingana nampianatra ny Ministeran'ny Fitantanam-bola mba hampianarana ny olona momba ny mety ho fampiasam-bola bitcoin.
Soisa nandefa asa Blockchain force
Soisa nandefa governemanta vaovao ny simenitra vondrona rafitra manodidina ny fitsipika sy ny ICOs blockchain startups.
Jereo koa Blockchain - notarihan'ny Minisitry ny Vola sy ny Toekarena Ueli Mausrer sy Minisitry ny Fampianarana Johann Schneider-Ammann - ahitana na manam-pahefana federaly sy eo an-toerana, ary koa ny mpikambana ao amin'ny isan-karazany sy ny ara-dalàna blockchain startups solontena, araka ny zava-misy taratasy.
Ny vondrona dia hijery ny ara-dalàna manodidina ICOs torolalana sy blockchain orinasa, raha mbola miara-miasa amin'ny Sekretariam-panjakana for International Financial Zava-dehibe - ny vatana federaly tompon'andraikitra amin'ny fampiharana tsena ara-bola sy politika misolo tena ny governemanta manerana sisintany tombontsoa ara-bola.
Schneider-Ammann nidera ny fampidirana ny blockchain orinasa ao amin'ny resaka manodidina ny rafitra ara-dalàna.
Hoy izy nanampy: “Blockchain no lasa zava-dehibe kokoa ho toy ny teknolojia ho an'ny indostria maro, tsy crypto bola. Inona no ilaina ny liberaly fitsipika, izay manokatra fahafahana Soisa ny toerana raha mbola miaraka amin'izay koa, fampihenana ny loza.”
Ny Blockchain Jereo koa ny fihaonana voalohany dia ho amin'ny Jan. 12, 2018.
Voalohany fitaomana fangatahana nanaiky andry tokana
A ela-mitsangana soso-kevitra mba hitondra “mahay” mahay fifanarahana amin'ny bitcoin ny harato lehibe vao naka dingana iray akaiky kokoa fampiharana.
Developers efa nametraka fangatahana ny fihoaram- Merkelized Abstract Syntaxe Trees (andry tokana), nanamarika ny fotoana voalohany fifanarahana io tolo-kevitra manan-tsaina no foto-kevitra iray ny fangatahana fihoaram- mitady ny fampidirana ny fehezan-dalàna an-bitcoin.
Ireo mahay tsy miankina fifanarahana dia mamela ireo mpampiasa mba hamaritra ny fepetra izay ny fandoavam-bola dia fandraisana, lafin-javatra maro manampy mila dinihin'ny ny fandaharana. Ny fifanarahana dia manan-tsaina dia hanaovany ny.
Ny fitambaran'ny BIPs koa ho an'ireo mahay mamela fifanarahana mba ho voatahiry amin'ny fomba voalamina tsara ny tena bitcoin blockchain, izany hoe izy ireo tsy manaova be dia be ny andian-tsoratra toerana, na ny habetsaky ny tahirin-kevitra izay azo tehirizina ao anatin'ny andian-tsoratra tsirairay ny fifanakalozana.
Raha mpandraharaha sy ny fiaraha-monina mivelatra kokoa bitcoin mankasitraka ny amin'ny fiovana, mety hanampy ho bitcoin amin'ny fomba malefaka fork.
A loharanom-baovao news.hodlhodl.com
Previous Post:Telegrama ICO drafitra
Next Post:Iza no nanao ny anjara lehibe indrindra ho an'ny orinasa crypto? Top 7